Architect က ဒါတွေ ပေးတယ်.. | Layma's World
« ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ ကိုယ်…… စွပ်ပြုတ် သောက်ကြမယ်… »
SP, on June 22, 2007 at 5:08 pm said:
စာကောင်းဆိုတာ ဖတ်သူတွေကို တွေးစေပါတယ်။
ဖတ်ပြီးရင် ပြီးပြီး ပျောက်ပျောက် မေ့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။
တွေးစရာတွေချန်ခဲ့တယ်။ အမျိုးမျိုးတွေးလို့ရတဲ့ စာတွေက ကောင်းပဗျာ လို့ ပြောရမယ်။
ဒီတစ်ခုကို ဖတ်တဲ့ လူတိုင်းက ဒီတစ်မျိုးတည်း တွေးမိတယ် ဆိုတာက ကောင်းတော့ ကောင်းတယ်။
ဒါပေမဲ့… မတူတဲ့ အတွေးတွေ ဖြစ်စေတာကမှ စာကောင်းလို့ ကျနော် ယူဆတယ်။
ခု … ဒီစာကို ဖတ်ပြီး သိပ်ကို ကြိုက်သွားတယ်။ ဖတ်ရကျိုးနပ်တဲ့ စာပဲဗျာ… ကျေးဇူးပါ။
jerry, on June 23, 2007 at 4:37 am said:
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုမှာ ဗိသုကာ လက်ရာတွေနဲ့ မကင်းတာကို
ဆေးခန်း ကစပြီး သချိုင်းအထိ ရေးပြသွားတာ တော်တော်မိုက်တယ်။
ကျနော်စိတ်ဝင်စားတာ တစ်ခုက အဲဒါတွေကို အရောင် တွေနဲ့ ပြသွားတာကိုပါ။
ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံ၊ သားဖွားခန်း ကို အပြာရောင် (health)
အိမ်၊တိုက်ခန်း၊ shophouse ကို ခရမ်းရောင် (residential buildings)
မူကြို၊ ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ် နဲ့ convention hall တွေကို ကြည်ပြာရောင် (education )
အားကစားရုံ ၊ ရေကူးကန် ၊ ကစားကွင်း၊ ပန်းခြံ ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်၊ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဂေါက်ကွင်း ၊ fitness center တွေက အစိမ်းနုရောင် ( entertainment & cultural )
ရုံး ၊ တရားရုံး ၊ ထောင် က လိမ္မော်ရောင် ( office )
ခန်းမ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ ၊ မိဘမဲ့ ကလေးများဂေဟာ က ကြက်သွေးရောင် ၊ ( social welfarre )
လေဆိပ်က အစိမ်းရောင် ( transport )
ရိပ်သာ က အနီရောင် ( religion )
သိသာ ကွဲပြားအောင် အရောင်တွေနဲ့ Label ခွဲပြထားတာလား ဒါမှမဟုတ် ဗိသုကာ ပညာမှာ အရောင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုမှု ရှိတာလား …ရှိရင် အဲဒီအကြောင်းကိုလည်း
နောက်ဆုံး စာအပြီးသတ်ကို တော့ ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေးလိုက်ပါတယ်…
သင်္ချိုင်း အရွေ့ခံရလို့ တရားခံရှာပြီး လည်ပင်းသွားညစ်တဲ့တစ္ဆေကြီး လူမှားသွားတဲ့ အကြောင်းက တွေးစရာအများကြီးရသလို
town planning ဆွဲခဲ့တဲ့ ဗိသုကာကြီးရဲ့ “….မင်း…လူ….မှား…..နေ….တယ်…..” ကိုဖတ်ပြီး ပြုံးမိသွားတယ် …
ကျနော်တို့ ရဲ့ Life planning က ကျနော်တို့ရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိတယ်ဗျ … အဲဒါတော့ ကိုယ့်တာဝန်ပဲ … ဒါပေမဲ့ အဲဒီ Life ကို အေးချမ်း ပြည့်ဝ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းအောင် planning လုပ်ဖို့ကတော့
right က အဓိကကျတယ်… Right မရှိရင် စိတ်တိုင်းကျတဲ့ LIFE ကို ရမှာ မဟုတ်ဘူး … ဆိုတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ life planning အတွက် right planning လုပ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာ မှီတည်နေတယ်ဗျ …
သေတာတောင် ရွေ့ပြောင်းပေးနေရတဲ့ တစ္ဆေကြီးလို မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ Life တွေအများကြီးရှိတယ် … လိုတာက RIGHT ပဲ … HUMAN RIGHT ပဲ …
ဘယ်သူ့ကို လည်ပင်းညစ်ရမလဲ ???
အချိန်မလွန်ခင် ညစ်မှ ရမှာ …
လူမှားပြီး လည်ပင်းမညစ်ဖို့လည်း လိုသေးတယ်ဗျ …
**** ကျနော့် အတွေးသတ်သတ်သာဖြစ်ပါတယ် … လေရှည်သွားတာ တောင်းပန်ပါတယ် … ဒီ post အတွက် ဒီဘလော့လေးရဲ့ ဗိသုကာ မလေး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ***
Layma, on June 23, 2007 at 12:24 pm said:
SP & Jerry,,,,လွတ်လပ်စွာ တွေးနိုင်ပါတယ်….( ကိုယ့် အတွေးနဲ့ကိုယ်ဖတ်ကြသည် ပေါ့ )
Jerry,,,,color တွေမှာ အနွေးရောင်….အအေးရောင်….စတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ရှိပါတယ်….အခု သုံးထားတဲ့ အရောင်တွေကတော့ color chart မှာတွေ့ တဲ့အရောင်တွေကို ပြီးစလွယ်ယူသုံးထားတာပါ….မေးလိုက်မှ ရှက်တောင်ရှက်မိတယ်… .ဆရာတစ်ယောက် ကတော့ residential, office….စတဲ့ ဇုံ တွေမှာ color သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိတယ်လို့ပြောဖူးပါတယ်….ဆရာနဲ့တွေ့ ခဲ့ရင် မေးထားပါဦးမည်…….။
naing, on June 23, 2007 at 4:37 pm said:
မသိသေးတာတွေ သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ ။ ဆရာ ပြောဖူးတာလေး သတိရပါတယ် ။ ခေတ်တစ်ခေတ်ပါတယ်တဲ့ ။ ကိုရီးယားကား ကြည့်တဲ့ ခေတ်ပဲ ။ ကျွန်တော်လည်း ကိုရီးယားကား ကြည့်ပါတယ် ။
Layma, on June 23, 2007 at 4:52 pm said:
naing,,မှန်ပါတယ်….အဲဒီခေတ်မှာ လူဖြစ်နေတော့လည်း….အဲဒီခေတ်ရဲ့ သရုပ်တွေက ရေးသမျှမှာ အရုပ် လာထင်နေရပါတယ်……။Comment .ပေးသွားတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ…..naing ။
သဉ္ဇာ, on August 9, 2007 at 1:52 pm said:
ဒီပို့စ်လေးကို အရမ်းအရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။
Layma, on August 10, 2007 at 3:34 pm said:
မသဉ္ဇာ ….အရမ်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…. လေးမလဲ ဒီပို့ စ်ရေးဖြစ်ခဲ့တာ အရမ်းအရမ်းကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်…..။
Anonymous, on August 11, 2008 at 1:33 am said:
Architecture မှာတော့Zoning ကိုကြိုက်သလိုအရောင်ခွဲကြတာပါပဲ
Master Plan မှာအရောင်တွေပေးပြီး Legend နဲ့ရှင်းလေ့ရှိတယ်
Town Planning မှာတော့ Landuse Zone တွေကိုသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်
ဒါပေမယ့်ဒါတွေက မြန်မာပြည်က Town Planning Dept.ကသုံးတာပါ
bo, on December 17, 2008 at 1:52 pm said:
မလေးမ ရေ၊ ဒီပို့ဝ်လေးကို ဖတ်ပီး စိတ်ထဲ စွဲနေတာ၊ အဲ့ဒီတုန်းက website address ကို မမှတ်ထားလိုက်တော့ အစ ပျောက်သွားတယ်။ အခု ပြန်တွေ့တော့ ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ ဒီ post လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်
Anonymous, on January 6, 2009 at 8:52 pm said:
အရေးအသားလေးကောင်းပါတယ် အတွေးအခေါ်လေးတွေနဲ့ တင်ပြသွားတာသဘောကျတယ်